Ithegi: Zoho CRM | Martech Zone
Ithegi: Zoho CRM
Umbhobho: Ukubonakala kwiPayipi yakho yokuThengisa
Lwesine, Okthobha 20, 2016 Lwesine, Okthobha 20, 2016 Douglas Karr
Ishishini lethu lahlukile kuba siyinkampani ekhethekileyo esebenza nabathengi abambalwa. Nangona kunjalo, ngolu papasho kunye nobukho bethu ekuhlaleni buvelisa uninzi lwezikhokelo. Zininzi izikhokelo, enyanisweni, kangangokuba amaxesha amaninzi asinalo ixesha kunye nezixhobo zokucoca ulungelelwaniso nganye kwezi zikhokelela ekuchongeni izikhokelo ezifanelekileyo kumashishini ethu. Siyazi ukuba siphose amanye amathuba amahle. Njengoko
Khulisa: Yakha eyona Dashboard yeNtengiso ye-Intanethi
NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Singabalandeli abakhulu bezalathi zokusebenza. Okwangoku, siyazenzekelayo iingxelo zolawulo lwenyanga kubathengi bethu kwaye, ngaphakathi eofisini yethu, sinescreen esikhulu esibonisa ideshibhodi yexesha lokwenyani yazo zonke izalathiso zentengiso zentengiso yabathengi bethu. Esi sisixhobo esihle-soloko sisazisa ukuba ngabaphi abathengi abafumana iziphumo ezigqwesileyo kwaye zeziphi ezinethuba lokuphuculwa. Ngelixa ngoku sisebenzisa iGeckoboard, kukho izithintelo ezimbalwa esikuzo